That's so good, right?: မြန်မာ့ မိတ်ကပ်အနုပညာရှင် မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
မြန်မာ့ မိတ်ကပ်အနုပညာရှင် မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
အခုတခါ တင်ပြမယ့် In & Out ကဏ္ဍအတွက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းလေးကိုတော့ ယနေ့ မြန်မာ့ထိပ်တန်း မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်တွေထဲက တယောက်ဖြစ်တဲ့ မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်းနဲ့ တွေ့ဆုံ့မေးမြန်းထားတာလေးကို တင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုလေးမှာတော့ မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်းရဲ့ ငယ်ဘဝဖြတ်သန်းမှု ပုံရိပ် တစိတ်တဒေသနဲ့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေအပေါ် ထားတဲ့ သူမရဲ့ စေတနာတွေ၊ အလုပ်အပေါ်မှာထားတဲ့ သူမရဲ့ တာဝန်ယူမှုအကြောင်းလေးတွေကို မေးမြန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မအေးစန်းအနေနဲ့ အခုလို မိန်းကလေးလိုမျိုး ဝတ်စားနေထိုင်လာခဲ့တာ ဘယ်အရွယ်လောက်ကတည်းက စခဲ့ပါသလဲ။
မိန်းကလေးလို ဝတ်တာကတော့ ဆယ်တန်းဖြေပြီး နောက်ပိုင်းမှပေါ့နော်။ ဆယ်တန်းဖြေပြီးတော့ တက္ကသိုလ်ဆက်မတက်ပဲနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ဝင်တဲ့အချိန်ပေါ့။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်း ချက်ချင်းကြီးတော့ မိန်းမလို ဝတ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဖားတပိုင်း ငါးတပိုင်းပေါ့။ အောက်က ပုဆိုးကို ထမိန်လို ဝတ်တယ်။ အပေါ်က ရှပ်အင်္ကျီကို အပေါ်က ထုတ်ဝတ်တာမျိုးပေါ့။
ဆိုတော့ မိန်းမလို အပြည့်ကြီးတော့ ဝတ်စားဆင်ယင်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ တခုရှိတာက မကြီးစန်းက ငယ်ငယ်ကတည်းက ကိုယ့်ရဲ့ Body Form က ယောက်ျားလေးနဲ့ သိပ်မတူဘူး။ မတူတဲ့ အဲဒီအခါကျတော့ ယောက်ျားလေးလို ဝတ်ရင် အရမ်းရုပ်ဆိုးတယ်။ အထူးသဖြင့် ရှပ်အင်္ကျီတွေ ဘာတွေကို ဝတ်ရင် ကိုယ်က ပုခုံးလျောတဲ့သူ ဆိုတော့ တော်တော် အဆင်မပြေဘူး။ ကြည့်ရတာ….ပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ သူများတွေလည်း ကြည့်ရတာ ကောင်းမယ့်ပုံ မပေါ်ဘူး။ အဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဒီလိုမျိုး ဖားတပိုင်း ငါးတပိုင်း ဝတ်ရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းပဲ အဲလိုပဲ။ နည်းနည်းလေး နာမည်ရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မိန်းကလေးလို ဝတ်တာပါ။ အဲဒီအခါကျမှ စတာပေါ့နော်။ အရင်တုန်းကတော့ ပွဲလမ်းသဘင် သွားရင်တော့ မိန်းမလို ဝတ်တယ်။ အမြဲတမ်းကြီး ဝတ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။
မကြီးစန်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ မကြာသေးခင် ကာလက ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်းပဲ မကြီးစန်းဘဝမှာ ဒီလိုမျိုး မိန်းကလေးလို နေချင်တဲ့အတွက် မိဘတွေရဲ့ အတိုက်အခိုက်တွေ အများကြီး ခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ရိမ်းဘိုးကို ပြောပြပေးပါဦး။
အဓိကကတော့ ဒီလိုပါ။ မိဘတိုင်းကတော့ ကိုယ့်သားသမီးကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်။ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ မွေးဖွားလိုက်တာပါ။ ကိုယ့်မိဘကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ပညာလည်း အရမ်းတတ်စေချင်တယ်။ ပြီးတော့ ဟို….. လူ့လောကကြီးထဲမှာ ကိုယ့်သားသမီးကို သူများတွေ နောက်တာ၊ ပြောင်တာ၊ နှိမ့်တာမျိုးတွေ မဖြစ်စေချင်ကြဘူးပေါ့။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ မအေးစန်းကို သူတို့ ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ ယူဆပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ဒါကိုလည်း နားလည်လာပါပြီ။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ ကိုယ်က ယောက်ျားလေးမဟုတ်တဲ့ အခါကျတော့ ယောက်ျားလေးလို မဝတ်ချင်ဘူး။ ဆံပင်ပုံစံ ထားတာကအစ….။
ဆံပင်နည်းနည်းရှည်တာနဲ့ အမေက ရှေ့တလက်မ နောက်ပြောင်ဆိုတဲ့ စစ်သားပုံစံကေလိုမျိုး အမေက ထိုးပစ်လိုက်တယ်။ အဲလိုမျိုး မိန်းမစိတ် ပေါက်မှာ စိုးလို့ပေါ့နော်။
ဒါပေမယ့် ဟို….. သူတို့မြင်တဲ့ အမြင်မှာဆိုရင်လည်း မိန်းမလျာဆိုတာ…. မအေးစန်းတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် ဥပမာ- လမ်းမတော်မြို့နယ်မှာ ဘယ်သူ နေတယ်၊ ဒဂုံမြို့နယ်မှာ ဘယ်သူ နေတယ်၊ မြောက်ဥက္ကလာမှာ ဘယ်သူနေတယ်ဆိုတာ ဟို…… သီးသီးခြားခြား ဘယ်မြို့နယ်မှာ ဘယ်သူနေတယ်ဆိုတာ သိသာလောက်တဲ့ လူနည်းစုပေါ့နော်။ လူနည်းစုဆိုတော့ တယောက်နဲ့တယောက် ဘယ်မှာနေလဲ၊ ကြည့်မြင်တိုင်မှာ နေတယ်၊ ဘယ်သူပေါ့။ အဲဒါမျိုးပေါ့။ ကျောက်တံတားဘက်မှာ ဘယ်သူပေါ့။ အဲလို အနေအထားလေးဆိုတော့ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထိတွေ့နေတာက ဘာလဲဆိုတော့ ရှောက်သီးဆေးပြား ရောင်းတဲ့သူတွေ၊ နတ်ကတော်တွေပေါ့နော်။ ဆိုတော့ သူတို့ကျတော့လည်း သူတို့ရဲ့စီးပွားရေး အရပေါ့နော်၊ ကုနြေ္ဒမရဘူးပေါ့နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ကို ခေါ်ချင်အောင်၊ ပြောချင်အောင် သူတို့ ဟာသလုပ်ရတဲ့အခါမျိုးလည်း ရှိမယ်။ ဖက်လဲတကင်း အတင်းဆွဲခေါ်တဲ့ ဟာမျိုးလည်း ရှိလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့ မိဘတွေက အဲဒါတွေကို မြင်ပြီးတော့ သူတို့မွေးထားတဲ့ သားက အဲလိုမျိုး ဖြစ်မှာ သိပ်ကြောက်တယ်။
အဲလိုဆိုတော့ အဲဒီအချိန်မှာ တကယ်တော့ မိတ်ကပ်ဆံပင်ဆိုတာကလည်း ရုပ်ရှပ်လောကမှာ မိတ်ကပ်စန္ဒီ ရှိမယ်၊ သတို့သမီးလောကမှာ မိတ်ကပ် ဦးတင်ထွဋ်ပေါ့နော်….. သူ ရှိမယ်။ အဲလိုမျိုးပေါ့နော်…. လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့ မိတ်ကပ် Artist တွေ၊ နည်းနည်းလေး မိန်းကလေး မိတ်ကပ် Artist တွေ ကြီးစိုးနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ မိဘတွေအမြင်မှာတော့ ဒီနတ်ကတော်နဲ့ ရှောက်သီးဆေးပြားသည် အခြောက်တွေကိုပဲ မြင်တယ်။ အဲတော့ ဖြစ်ချင်တယ်လည်း အကိုတွေကြားထဲမှာ နေတယ်ဆိုတော့ အကိုတွေက ရုပ်တွေကလည်း ချော၊ အရမ်းကို လမ်းသရဲလို အမိုက်စားတွေဆိုတော့ တွေ့လို့ရှိရင် ဥပမာ- ရွှေတိဂုံဘုရား တပေါင်းပွဲဆိုရင် လူအရမ်းစုံတယ်လေ။ မိန်းမလျာ သဘာဝပေါ့နော်… အဲဒီမှာ လိုက်ပြီးတော့ မိတ်ဆက်တာတို့၊ လိုက်ခေါ်တာတို့၊ ဘာတို့ဆိုရင် အကိုတွေက အရမ်း မုန်းတာ၊ မကြိုက်ဘူး။ မကြိုက်တော့ ကိုယ်တွေအလှည့်လည်းကျတော့ အကိုတွေက အပြင်မှာ အခြောက်တွေနဲ့ အဲလိုမျိုး တခုခုတွေ့ကြုံခဲ့ရင် အိမ်ရောက်ရင် အရိုက်ခံရပြီ။ အိမ်ရှေ့ကနေ ရှောက်သီးဆေးပြားသည် ဖြတ်ရင် အိမ်ရှေ့ကို မထွက်ခိုင်းတော့ဘူး။ အိမ်အပေါ် ထပ်ခိုးမှာ ထားထားတာမျိုးပေါ့။
မိုးကြိုးငှက်ငယ်ပေါ်ကစက မိုးကြိုးငှက်ငယ်ကိုဆို အရမ်းကြည့်ချင်တယ်……… အရမ်းကြည့်ချင်တယ်…..။ တအိမ်လုံးသွားကြည့်တယ်။ ကိုယ့်ကို ခေါ်မသွားဘူး။ ထားခဲ့တယ်။ အခြောက်ဖြစ်မှာစိုးလို့ အဲလောက်အထိပေါ့နော်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာက မိန်းမလျာလူတန်းစားဆိုရင် လူတွေ နှိမ်တာတို့၊ ရီစရာတို့ အဲလိုမျိုးတွေ ဖြစ်မှာစိုးလို့ ထင်ပါတယ်။ အဲတော့ အဲလိုမျိုး သူတို့က ထိန်းချုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ အခုအချိန်မှာကျတော့လည်း ဩော်… သူတို့ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုဟာ ကိုယ့်အတွက်ပါလားဆိုတာကို သူတို့စေတနာကို နားလည်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ထင်သလို၊ မြင်သလိုမျိုး မအေးစန်းက ဒီလိုမျိုး နတ်ကတော်တို့၊ ရှောက်သီးဆေးပြားသည်တို့ မဟုတ်ပဲနဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ အတတ်ပညာနဲ့ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းတာပေါ့နော်။ အဓိကကတော့ ပန်းချီဆွဲတာကို ဝါသနာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Nature နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အခါမှာ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ အတတ်ပညာနဲ့ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းတာပေါ့နော်။
ဆယ်တန်းပြီးတော့ တက္ကသိုလ် ဆက်မတက်တော့ပဲနဲ့ ဒီလောကထဲကို ဝင်လိုက်တယ်။ ဝင်လိုက်ပြီးတော့မှ သူငယ်ချင်းတွေက ဘွဲ့ရတဲ့အချိန် ကိုယ်က ဒီဘက်မှာ သူများဆိုင်တွေမှာ အလုပ်သမားပဲ ရှိသေးတယ်။ အဲလိုမျိုးပေါ့နော်။ ဆိုတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝင်ငွေလေးကလည်း ရလာတယ်။ မိဘကိုလည်း ပြန်ပြီး ထောက်ပံ့နိုင်လာတယ်။ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ အကိုတွေက မထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်က (သူတို့အထင်သေးထားတဲ့၊ သူတို့ စိုးရိမ်နေတဲ့ လူတယောက်က) မိဘကို ပံ့ပိုးနိုင်တယ်ဆိုတော့ သူတို့တွေ အရမ်းလည်း ဝမ်းလည်း သာကြတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လွှတ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဝတ်ဝတ် ဘာမှမပြောတော့ဘူး။ အဲလိုမျိုးပေါ့နော်….။
ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းက ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် မနှိမ်ပဲနဲ့ မအေးစန်းကို ဖေးမခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိခဲ့ဖူးလား။
သူငယ်ချင်းတွေ ရှိခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာက များသောအားဖြင့် မကြီးစန်းက ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပဲ ပေါင်းတယ်။ ကျောင်းတွေမှာဆိုရင်လည်း မိန်းကလေးတွေနဲ့ အတူတူ မထိုင်ရဘူးလေ။ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပဲ ထိုင်ရတယ်။ ထိုင်ရတဲ့အခါကျတော့ တချို့ကျတော့လည်း နောက်တယ်၊ ပြောင်တယ်ပေါ့။ တချို့ကျတော့လည်း သူတို့နှိမ့်ချင်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ အပျော်အနေနဲ့ နောက်တာ။ အဲတော့ နောက်တဲ့အခါမှာ ဘေးနားက နေတဲ့လူတွေက မနေနိုင်ဘူး။ မင်းတို့ မနောက်ပါနဲ့ကွာ၊ ဘာညာနဲ့ ကိုယ့်ကို ကာဗာလုပ်ပေးတဲ့ လူတွေလည်း ရှိတယ်။ တခါတလေကျရင် ဆရာမတွေက (စတိတ်ကျောင်းမှာဆိုတော့) ခေါင်းရှုပ်တော့ ကဲ လာစမ်းပါ ဟယ်၊ လာ…နင် မိန်းကလေးနားမှာ ရောထိုင်ဆိုပြီး မိန်းကလေးနားမှာ ထားတဲ့အခါတွေလည်း ရှိတယ်ပေါ့။ အဲလိုမျိုး အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေလည်း ရှိတယ်။ နောက်ပြောင်ချင်တဲ့ လူတွေလည်း ရှိတယ်။ အမျိုးမျိုးပါပဲ။ တွေ့ခဲ့ရတယ်။
အခုနက မကြီးစန်းရဲ့ မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်က ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ မကြီးစန်းက သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နေတတ်တဲ့ လူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုနိုင်မလား။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ မကြီးစန်းက အခုကြီးပြင်းတဲ့အရွယ်အထိ (လုပ်ငန်းခွင်ထဲကို မဝင်ခင်အချိန်ထိ) မိန်းကလေး တယောက်လိုမျိုး အမေက စောင့်ရှောက်ခဲ့တာ။ သွားလေရာ သူ လိုက်တယ်။ ဘယ်တော့မှ မလွှတ်ဘူး။ ပြီးတော့ အထက်ကလည်း အမဖြစ်နေတဲ့ အခါကျတော့ (အမနဲ့ ကိုယ်နဲ့က ဆန့်ကျင်ဖက်…..။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ငယ်ငယ်က အဲလိုမျိုး အပြင်တွေဘာတွေ သွားတဲ့အခါ သူနဲ့ နှစ်ယောက်ယှဉ်သွားရင် အမေက ငါမွေးထားတာက ယောက်ျားက ကိုယ်လုံးလှပြီးတော့ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ မိန်းမက ကိုယ်လုံးမလှ ဖြစ်နေရတာလဲ ဆိုပြီး…… အဲလိုမျိုး မကြီးစန်း ကိုယ်လုံးက မိန်းမနဲ့တူနေတော့ တခါတလေကျလို့ရှိရင် အမေက နောက်သလိုလိုမျိုး၊ ရီသလိုလိုမျိုးနဲ့ ပြောတယ်။
သူတို့ကြားဖူးနားဝက ဘာလဲဆိုတော့ အခြောက်တွေက အဲလိုမျိုး သူငယ်တွေကို တွေ့ရင် ယောက်ယက်ခတ်တယ်။ အဲလိုမျိုး ကြားဖူးနေတာ။ သူတို့မျက်လုံးနဲ့ မမြင်ဖူးပါဘူး။ ကြားဖူးတာပေါ့။ အကိုတွေက အပြင်သွားတော့ လေဟာပြင်ဈေးမှာ အခြောက်တယောက်က ဘယ်သူ့ကို အတင်း လက်လိုက်ဆွဲတာတို့၊ မိတ်ဆက်တာတို့၊ ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့တာတို့ဆိုတာကို သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားဖူးနေတော့ ငါ့သား အခြောက်သာဖြစ်ရင် အဲလိုလားပေါ့နော်။ ဆိုတော့ သူတို့ တွေးပါလိမ့်မယ်။ တွေးတော့ ဒီလို Sex ကိစ္စဘာညာဆိုတာ တော်တော် စိမ်းတာပေါ့။ မရင်းနှီးနဲ့တဲ့ လူတွေဆိုရင် စိမ်းတယ်လေ။ ဆိုတော့ အဲလိုကိစ္စတွေကိုလည်း စိုးရိမ်တယ်။ စိုးရိမ်တော့ အချိန်ပြည့် နောက်က လိုက်တယ်။ သွားလို့ရှိရင်လည်း သူ (အမေ)နဲ့မှ….။ တော်တော်ကြီးတဲ့အထိပေ့ါနော်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲကို ဝင်တဲ့အထိ စိတ်မချဘူးပေါ့နော်။ အဲလိုမျိုး ထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်။
သိမ်မွေ့တယ်ဆိုတာကတော့ နဂိုကတည်းကပါ။ ဟို မိဘတွေရဲ့ ဆိုဆုံးမမှုတွေပေါ့နော်။ မိဘတွေက လိမ်မာရမယ်။ ယဉ်ကျေးရမယ်။ လူကြီးသူမတွေကို ရိုသေရမယ်။ ဆရာသမားတွေကို ရိုသေရမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတမ်း အစဉ်အလာပေါ့လေ… ဒါကျောင်းတွေမှာလည်း မင်္ဂလာသုတ်တို့၊ လောကနီတိတို့ သင်တာတွေဆိုတော့ ဒါတွေကတော့ မိဘတွေအပြင်ပေါ့နော်.. ကျောင်းက သင်ပေးလိုက်တဲ့ ဟိုဟာပါပဲ။ နေထိုင်မှု ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း ဆိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
မကြီးစန်းက အခုလိုမျိုး မိတ်ကပ်ပညာလောကမှာ အောင်မြင်လာတာ မကြီးစန်း ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ယူလေ့လာခဲ့တဲ့ ပန်းချီပညာက အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ရနိုင်မလား။
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ယူခဲ့တဲ့ ပန်းချီပညာဆိုတာ ကလေးပန်းချီလောက်ပဲ ရှိတယ်။ သိပ်ပြီးတော့ Professional လုပ်စားရလောက်တဲ့အထိ အနေအထားမျိုး မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ နောင်တချိန်မှာ မကြီးစန်း လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒက ပန်းချီဆွဲခြင်းပေါ့။ အခုကိုယ့်ရဲ့ နောက်ဆုံး လုပ်ငန်းတွေ၊ ဘာတွေက နာမည်လည်း သိပ်မရှိတော့ဘူး၊ မှေးမှိန်သွားတဲ့အချိန်၊ ကိုယ့်ဘဝကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ တရားထိုင်မယ်တို့၊ တရားစခန်းဝင်မယ်တို့ လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူး။ ပန်းချီဆွဲမယ်။ အဲလိုမျိုးပေါ့နော်။ ဥပမာပေါ့- စန္ဒယားတီးတာကို ကြိုက်တယ်။ စန္ဒယားတီးတာမျိုးလေးနဲ့ အဲလိုမျိုး နေသွားမယ်ပေါ့။ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ…….။ အဲလို စိတ်ကူးထားတယ်။ အဲတော့ ပန်းချီပညာက ကိုယ်ဝါသနာပါတာ မှန်ပေမယ့်လည်း တကယ့်နက်နက်နဲနဲ သင်လာခဲ့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ လေ့လာရအုံးမှာလေ။ ဒီ မိတ်ကပ်ပညာကတော့ ကိုယ့်အောက် ငယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်နဲ့ Level တန်းတူ သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ထက် ကြီးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူလိမ်းလိမ်း မကြီးစန်း လေ့လာတယ်။ နောက်တခုက ကိုယ့်ရဲ့ ဒီ…. အခုဆိုရင် Fashion TV မှာ လိမ်းတာမျိုး၊ နောက်တခုက မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ လိမ်းခြယ်တာမျိုး စိတ်ဝင်စားတယ်။ စိတ်ဝင်စားဆုံး အလုပ်ကတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းတာပေါ့နော်။ နောက် မိတ်ကပ် Product တွေကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ ခရီးထွက်တိုင်းလည်း ကိုယ့်မှာ ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ ဝယ်လာဖြစ်တယ်။ အဲလိုမျိုးပေါ့နော် အမြဲတမ်း ဘယ်အချိန် အပျော်ဆုံးလဲလို့ မေးရင် မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ အချိန်ဟာ အပျော်ဆုံးပဲ။
မကြီးစန်းက မိတ်ကပ်လောကထဲမှာ နှစ်ပေါင်းက နှစ်ဆယ်ကျော်သွားပြီ။ မကြီးစန်း အောင်မြင်နေတာကလည်း ဆယ်စုနှစ်တခု မကတော့ဘူးပေါ့နော်။ ဒီလို အောင်မြင်မှုမျိုး ရလာအောင် မကြီးစန်း ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲ။ ဒီလိုအောင်မြင်မှု ရဖို့အတွက်ကို ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားခဲ့ရလဲဆိုတာကို ရိမ်းဘိုးပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးပါဦး။
အောင်မြင်အောင် လုပ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ မကြီးစန်း အင်တာဗျူးတိုင်းမှာ ဖြေပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တခုကို ကိုယ်က ဘယ်အတတ်ပညာနဲ့ ရပ်တည်မလဲဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက် Plan ချတယ်ပေါ့။ ချတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ်က မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်းကို ဝါသနာပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ်နာမည်ကြီးချင်လို့ လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆရာသမားဆီမှာ ပညာသင်တယ်။ သူသည် ကိုယ့်ကို ပညာသင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးရှိတယ်။ အဲတော့ သူ့ကို ကိုယ်က အလုပ်အကျွေး ပြန်ပြုချင်တယ်။ သူနဲ့အတူတူပေါ့။ သူပေးသလောက်လေးနဲ့ ကိုယ့်ဘဝလေးကို…..။ ကိုယ် ဒီလုပ်ငန်း လုပ်နေရရင် ပြီးရော။ ကိုယ့်ဘဝက ဒီလောက်ပဲ။ မျှော်လင့်ချက် အများကြီး မထားဘူး။ ကိုယ်ရတဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ မိဘကို ပြန်ရှာကျွေးမယ်။ မိသားစုကိုပေါ့နော်။ ကိုယ့်ဘဝကို ဖူလုံအောင် နေမယ်။ ဆရာသမားနဲ့ အတူတကွ နေမယ်လို့ စိတ်ကူးခဲ့တယ်။ ဒါဟာ မှန်သော သစ္စာစကားပဲ။
သို့သော် တချိန်မှာ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ဆရာသမားတွေ သူ့ရဲ့ရှယ်ယာနဲ့ အတူတူ လုပ်တဲ့အခါကျတော့ ကိုယ်က နောက်ပိုင်းမှာ ဆရာရဲ့ အားထားရတဲ့ အနေအထားတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ပရိသတ်တွေ၊ ဆရာ့ Customer တွေ လက်ခံတဲ့ အနေအထားတွေ ဖြစ်လာတဲ့ အခါကျတော့ သူ့ရဲ့ရှယ်ယာရှင်တယောက်က ဘာလဲဆိုတော့ မကြီးစန်းကို တချိန်ကျရင် ဒီနေရာကို ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မျှော်မှန်းချက် ရှိလာတဲ့ အခါကျတော့ ကိုယ့်ကို ဒီနေရာမှာ မထားချင်တော့ဘူး။ မထားချင်တဲ့အခါမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ပထုတ်လိုက်တာပေါ့။ ပထုတ်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ အဲဒီဆိုင်ကနေ ပထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ဝမ်းပန်းတနည်းကို ငိုခဲ့မိတာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်က ဒီဆရာသမားနဲ့ နေချင်တာကိုး…။ အဲလိုမျိုး ပထုတ်ခံလိုက်ရတော့ တခြားတဆိုင်မှာ သွားလုပ်တယ်။ အဆင်မပြေဘူး။ သူငယ်ချင်းနဲ့ ရှယ်ယာလုပ်တယ်။ သူငယ်ချင်းနဲ့လည်း အရွယ်တူဆိုတော့ တယောက်နဲ့တယောက် သူ့မာန၊ ကိုယ့်မာနပေါ့လေ။ အဲလိုမျိုးတွေ အဆင်မပြေ ဖြစ်ပြီးတော့မှ နောက် ၃၅ လမ်း၊ မကြီးစန်း အခုလက်ရှိနေတဲ့ ၃၅ လမ်းမှာ အလုပ်လုပ်တယ်။ လုပ်တဲ့အခါကျတော့ သူတို့ဆိုင်က ဖွင့်ထားပေမယ့် ဝင်ငွေမရှိတဲ့ ဆိုင်…..။ ကိုယ်ရောက်လာတဲ့ အခါကျတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Customer နည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့ပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်လေးနဲ့ တဖြည်းဖြည်း တဆင့်စကား တဆင့်နဲ့ပေါ့။ ပွားပြီးတော့ Customer တွေ များလာတဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကြီးလည်း တိုးတက်လာတယ်။
အခုနက မကြီးစန်း ဖြေခဲ့သလိုပေါ့။ မကြီးစန်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းချင်တာလေ။ အဲတော့ မကြီးစန်း လုပ်နေရတဲ့အပိုင်းက Saloon အပိုင်း ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ်က မိတ်ကပ်လိမ်းတာကိုလည်း ထပ်လုပ်ချင်တယ်။ ထပ်လုပ်ချင်တဲ့ အခါကျတော့ မင်းသမီး တင့်တင့်ထွန်းပေါ့…။ မင်းသမီး တင့်တင့်ထွန်း တီဗွီမှာ ကတာတို့၊ ဘာတို့ အရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ကို လိမ်းခွင့်ရခဲ့တယ်။ အရမ်းလိမ်းချင်တာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆိုင်ရှင်က မလွှတ်ဘူး။ နောက်တခုက အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်မှာ ပြည့်စုံတဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေ မရှိဘူး။ မရှိတဲ့ အခါကျတော့ ဆိုင်ကပိုင်တဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းကို ယူပြီးတော့ Outdoor ထွက်ပြီး သွားလိမ်းရမှာ။ ဆိုတော့ သူတို့က ကိုယ့်ကို အဲဒီ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ယုံကြည်ပြီးတော့ မလွှတ်လိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ ဆိုတော့….။ မကြီးစန်းက တသက်လုံး ကိုယ့်ဘဝမှာ ရိုးသားအောင် နေမယ်လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တဲ့ သူ….။ အဲတော့ သူတို့က ကိုယ့်ကို မိသားစုဝင် အရင်းတယောက်လို ကောင်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ စကားလေးက မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ စိတ်ထဲမှာ တော်တော်ကို စွဲသွားစေတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ချဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့။ ဒါလောက် ငါ ရိုးသားနေတယ်၊ ယုံကြည်အောင် နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေက သက်သက်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်က ရိုးရိုးသားသား နေတာ။ ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝင်ငွေ တိုးလာတာကိုလည်း သူတို့အသိပဲ။ ကိုယ့်ကို အားကိုးနေရတဲ့ အနေအထားမှာ ကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှု မရှိဘူးဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို စော်ကားတာနဲ့ အတူတူပဲပေါ့။ လူဆိုတာကတော့ စကားပုံထဲက အတိုင်းပါပဲ။ မရှိ ခိုးနိုးပေါ့နော်။
မကြီးစန်းက အဲဒီတုန်းက မပြည့်စုံဘူး။ မပြည့်စုံတော့ အဲလိုမျိုး သူတို့ မယုံကြည်တာပေ့ါနော်။ သူတို့ကိုလည်း အပြစ်ပြောလို့တော့ မရပါဘူး။ ဆိုတော့ အဲဒီမှာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ တွန်းအား ဖြစ်သွားတာပေါ့။ တချိန်ကျရင်တော့ ငါ မိတ်ကပ်ပညာရှင်ကြီး ဖြစ်အောင်…. ပညာရှင် မဟုတ်ပါဘူး… မိတ်ကပ်ဆရာကြီး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလေးနဲ့ ဆိုင်ခွဲထွက်လိုက်တယ်။ ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပစ္စည်းမပြည့်မစုံလေးနဲ့ပေါ့… မှန်တင်ခုံလေး တခု….။ မှန်တင်ခုံဆိုတာကလည်း မှန်လေးတချပ်နဲ့ ခုံလေးတလုံးပေါ့…. ဒါပဲ။ ခုံဆိုတာကလည်း အိမ်က ထမင်းစားစားပွဲ အဟောင်းလေး တလုံးပေါ့။ ပန်းကန်ဆေး ဘေစင်က ခေါင်းလျော်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ တင်ပေါ့။ တော်တော်ကို မပြည့်မစုံနဲ့ လုပ်ခဲ့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် အခု ကြေငြာတွေ ထည့်ကြတယ်။ ကျမတို့ လုပ်ငန်းက ဘယ်လိုတွေ လုပ်ပါတယ်။ ကျမတို့က ဘယ်လို Service တွေ ပေးပါတယ်… ဘယ်လို ဘယ်လို… စသဖြင့် အဲလိုမျိုး လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြေငြာကြတယ်။ မကြီးစန်း တခါမှ မကြေငြာခဲ့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်း ကောင်းခြင်းသည် ကိုယ့်လုပ်ရပ်အပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်။ အဲဒီ လုပ်ရပ်ဆိုတာ ဟန်ဆောင်ပြီး လုပ်လို့မရဘူး။ တကယ်လုပ်မှ၊ တကယ်တတ်မှ၊ တကယ်စေတနာပါမှ ပေါ်လွင်တာလေ။ ဆိုတော့ အဲဒီကနေ တဆင့်စကား တဆင့်နဲ့ပေါ့.. Customer တွေ များလာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တမင်သက်သက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြေငြာစရာ မလိုခဲ့ဘူး။ အဲတော့ နာမည်ကြီးတယ်ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို တမင်သက်သက် မကြီးစန်း လုပ်ယူထားတာမျိုး မဟုတ်ပဲနဲ့ ကိုယ့်ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကပေါ့နော်…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူဆိုတာကတော့ စိတ်နဲ့ ခံစားပြီး လက်နဲ့ ဖန်တီးရတာပဲ။ အဲဒီအတွက် အမှားလည်း ရှိမှာပဲ။ ချွတ်ယွင်းမှုလည်း ရှိမှာပဲ။ အဲဒီချွတ်ယွင်းမှုတွေကို ခွင့်လွှတ်တယ်။ လိုအပ်ချက်တွေကို နားလည်ပေးခဲ့တယ် ဆိုတဲ့လူတွေက မကြီးစန်းကို ချစ်ကြလို့သာလျှင် ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ ယနေ့ထက်ထိ ရပ်တည်နိုင်အောင် ဖေးမလာတယ်။ မကြီးစန်းရဲ့ ရပ်တည်မှုက ဘာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေက အဓိကက လူကိုချစ်တဲ့အတွက် သူတို့က ရှိသမျှ အပြစ်တွေကို ခွင့်လွှတ်ခဲ့ကြတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ဆိုရင်လည်း အမြဲတမ်း နောက်ကျတယ်။ ပြဿနာမျိုးစုံပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့ မကြီးစန်းကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ပြုံးချိုပြီးတော့ ဘာမှ မပြောတော့ဘူး။ ခွင့်လွှတ်လိုက်ကြတယ်။ နောက်တခါ နောက်ပွဲတွေဆိုရင်လည်း သူတို့ လာအပ်ကြတယ်။ ဒါ သူတို့ မကြီးစန်းကို ချစ်ကြလို့သာလျှင်ပေါ့နော်။ အဲလို ယူဆလို့ ရတယ်။ အဲတော့ နာမည်ကြီးအောင် တမင်သက်သက် လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟို မကြီးစန်းက ကိုယ့်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ် တာဝန်ကျေချင်တယ်။ စေတနာပါချင်တယ်။ အဲလိုမျိုးပေါ့… ကိုယ့်အလုပ်လေးတခုကို တာဝန်ကျေအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ သဘောပါပဲ။ အဲဒီအတွက် ပြန်ခံစားရတဲ့ တုံ့ပြန်မှုပဲပေါ့နော်။
ကိုယ်က တပည့်အနေနဲ့ ဆရာတယောက်ဆီကနေ တပည့်ခံပြီး ပညာသင်ကြားခဲ့တုန်းက ခံစားချက်တွေကို အခုအချိန်မှာ ကိုယ်က တပည့်တွေကို ပြန်သင်ပေးတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို မကြီးစန်း ပိုပြီးနားလည်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလား။
တကယ်တော့ သူတို့ကို ပြောပြပါတယ်။ ပြောပြတယ်ဆိုတာက မကြီးစန်းတို့ ခေတ်တုန်းက ပညာတခုကို သင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူး။ မလွယ်ဘူးဆိုတာက နာမည်ကြီး မိတ်ကပ်ဆရာဆိုတာက လက်ချိုးရေလို့ ရတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ လူတွေကိုလည်း သူတို့ လက်မခံရဲကြဘူးပေါ့နော်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း မသိ၊ ဘယ်လို စာရိတ္တရှိမှန်းလည်း မသိဘူးပေါ့နော်။ အဲတော့ လက်ခံခဲ့တဲ့ ဆရာသမားကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်တခုက အဲဒီအခါတုန်းက ကိုယ်က အလုပ်လုပ်ချင်တာ တခုပဲပေါ့နော်။ ပညာသင်ဖို့ဆိုတာက သူတို့ဆီမှာ ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့လည်း မသင်နိုင်ဘူး။ အဲတော့ အောက်ခြေသိမ်းကစပြီး လုပ်ပြီး သင်ရတယ်။ တံမြက်စည်းလှည်းလည်း ကိုယ်၊ ကြမ်းတိုက်လည်း ကိုယ်၊ အမှိုက်သွန်လည်း ကိုယ်၊ ပစ္စည်းလိုလို့ ပြေးဝယ်လည်း ကိုယ်၊ အဲလိုမျိုးစုံပေါ့ အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်မျိုးစုံကို လုပ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ရလို့လည်း တခါမှ မောတယ်လို့ မခံစားရဘူး။ ဒါ ငါ အလုပ်လုပ်နေတယ်ပေါ့။
အခကြေးငွေ ကျလို့ရှိရင်လည်း မကြီးစန်းက မနက် ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီလောက် လာတယ်။ မကြီးစန်းတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ မနက် ၂ နာရီ ၃ နာရီလည်း ထလိမ်းတာ။ အဲဒီအချိန်ကတည်းက ကိုယ်ရောက်ရတာပေါ့နော်။ ပြီးရင် တနေကုန်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ပဲ။ အခုနက ပြောခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အကုန်လုံးကို ပြေးကာလွှားကာနဲ့ ကိုယ်ပဲ။ လုပ်ပြီးတော့ ညဆိုရင်လည်း ဥပမာ- Customer မကုန်မချင်း ၈ နာရီ၊ ၉ နာရီထိလည်း ကိုယ်ပဲ။ ကိုယ်က တနေ့မှ ခုနှစ်ကျပ်ပဲ ရတယ်။ ခုနှစ်ကျပ်ဆိုတာက နှစ်ကျပ်တိုးပေးထားတာ။ ငါးကျပ်ပဲ ရတယ်။ တလမှာ ၁၅၀ လောက်ပဲ ရတယ်။ ဆိုတော့ ကိုယ့်မျှော်လင့်ချက်က ဘာလဲ။ ဒီဆရာသမားဆီမှာ နေဖို့ပဲ မျှော်လင့်ချက်ရှိတာဆိုတော့ တခါမှတော့ စိတ်မပျက်မိပါဘူး။ ရသလောက်လေးနဲ့ပဲ ငါးဆယ်ကို ကိုယ်သုံး၊ တရာကို မိဘကို ပေးပေါ့။ မိဘအနေနဲ့ကလည်း လောက်တယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံလေးက အထောက်အကူ ဖြစ်ပေါ့။ အခုက ပြောသလိုပါပဲ။ မနက်အစောကြီး ထလာလို့ ဆရာက မနက်ကျရင် လက်ဖက်ရည်တခွက်သောက်ပေါ့။ တိုက်တယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုတာက လက်ဖက်ရည် တခုတည်းပါပဲ။ ကျန်တာ ဘာမှ မပါဘူး။
လက်ဖက်ရည်တခွက်နဲ့ နေလိုက်တာ နေ့ခင်း ထမင်းစားချိန် အထိပဲ။ နေ့ခင်းထမင်းစားချိန်ကျတော့လည်း ကိုယ်က မိုးမလင်းခင်ကတည်းက လာတဲ့သူဆိုတော့ ထမင်းချိုင့် ဘယ်ပါမလဲ။ မပါဘူး။ အဲတော့ သင်တန်းတက်တဲ့သူတွေဆီက ဟိုလူ့ဆီက တဇွန်းစား၊ ဒီလူ့ဆီက တဇွန်းစား အဲလိုမျိုးနဲ့ နေခဲ့ရတယ်။ အဲတော့ ကိုယ့်ကလေးတွေ ကျလို့ရှိရင် အဲလိုမျိုး အနှိမ်ခံရတဲ့ဘဝ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ အဲလိုမျိုး မဖြစ်စေရဘူးဆိုပြီး သူတို့ကို ကိုယ့်ဖက်က လိုလေသေး မရှိအောင် ထားပေးတယ်။
ဒါပေမယ့် တခါတခါကျတော့ အလုပ်တန်ဖိုးကို သူတို့တွေ နားမလည်ဘူးပေါ့နော်။ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတခုက ဘာလဲဆိုတော့ မကြီးစန်းဆီမှာ အလုပ်လာတောင်းကြတယ်။ သနားပါတယ် ကဲ လက်ခံလိုက်ဆိုတော့ အလွယ်တကူ ဝင်လာတယ်။
အလွယ်တကူပဲ ပြန်ထွက်သွားကြတယ်။ လုပ်ငန်းတခုမှာ အလွယ်တကူ ဝင်၊ အလွယ်တကူ ထွက်သွားရတော့ သူတို့မှာ ဆုံးရှုံးတယ်လို့ မယူဆဘူး။ နောက်တဆိုင်ကို ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီမှာလည်း နေလို့ထိုင်လို့ အဆင်မပြေရင် နောက်တဆိုင်ကို ရောက်သွားပြန်တယ်။ ဆိုတော့ ကလေးတွေမှာက ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် မရှိသလိုပဲ။ ပြီးတော့ ရှေ့ရေးကိုလည်း မပူတတ်ကြဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မချစ်တတ်ကြဘူးပေါ့။ တကယ်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်ရမှာလေ။ ငါ ပညာတခုကို တတ်အောင် သင်ရမယ်။ သင်တဲ့အခါ အဆင်ပြေတာလည်း ရှိမယ်။ အဆင်မပြေတာလည်း ရှိမယ်။ ကိုယ့်ဖက်က အနစ်နာခံရတဲ့အခါလည်း ခံရမယ်။ သို့သော် တချိန်ကျရင် ငါ နေရာတခုကို ရရမယ်ဆိုတဲ့ ကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေါ့… ကိုယ့်ကိုယ်ကို တနေ့ကျရင် ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်လေးတော့ ရှိသင့်တယ်လို့ မကြီးစန်းထင်တယ်။
မကြီးစန်းဆီမှာ ပညာသင်တဲ့ ကလေးတွေကို ထမင်းကျွေးထားတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ပညာသင်တဲ့အတွက် အခကြေးငွေလည်း ရတယ်။ ကိုယ်က သူတို့ကို မုန့်ဖိုးပြန်ပေးတယ်။ ဩော် သူတို့ သွားတဲ့လာတဲ့ စရိတ်ရှိမယ်။ Breakfast စားရင် ဗိုက်ဆာနေမှာပေါ့.. ဆိုပြီး စာနာပြီးတော့ ကိုယ့်ဖက်က ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေ အားလုံးက အလွယ်တကူ ရနေတဲ့အခါကျတော့ သူတို့တွေက တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း မသိကြဘူး။ အခုခေတ်ကလေးတွေနဲ့ ကွာတာမျိုးပေါ့နော်။ တခါတလေကျတော့လည်း သူတို့ကို နားလည်အောင် ပြောပြတယ်။ ဟဲ့… မိတ်ကပ်လိမ်းတယ်ဆိုတာလို့ ချမ်းသာအောင် လူတိုင်း လုပ်လို့ရတယ်။ ချမ်းသာတဲ့သူတွေ အများကြီး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအားလုံးက နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော်ကို ဝင်ချင်တဲ့အချိန် ဝင်လို့မရဘူး။ မိတ်ကပ်ဆရာတွေက အလွယ်တကူ ဝင်လို့ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းတယ်ဆိုတဲ့သူကို နေရာထိုင်ခင်းကအစ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေရာမှာ ဧည့်ခံတာမျိုးတွေနဲ့ နေရာပေးခံရတယ်။ အဲဒါမျိုးပေါ့။ ဒီအလုပ်ဆိုတာ မွန်မြတ်ပါတယ်။ လူတွေကို လှဖို့၊ စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ ကိုယ့်ရဲ့အတတ်ပညာနဲ့ ဖန်တီးပေးရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မွန်မြတ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဝါသနာပါတဲ့လူတွေ၊ ဆွဲခေါ်လို့ ရနိုင်မယ့်လူတွေကို ကိုယ့်ဖက်က ဆုံးမတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။
မကြီးစန်းတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မိန်းမလျာတွေဆိုတာ ရှားတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ အခုချိန်မှာကျတော့ ပေါလာပြီလို့ ပြောလို့ ရနိုင်ပါသလား။ ဒီဘက်ခေတ်နဲ့ မကြီးစန်းတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ခေတ်ကြားထဲမှာ ဘာတွေ ကွာခြားသွားပြီလဲဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် လမ်းထွက်လို့ရှိရင် အရမ်းအစအနောက် ခံရတယ်။ ပုံမကျပန်းမကျ ဖြစ်နေမှာပေါ့လေ။ အခုကလေးလေးတွေ၊ အငယ်လေးတွေ စကားပြောတာ၊ ဆိုတာ လက်ဟန်ခြေဟန် ပြာယာခတ်နေတာကို ကိုယ်တွေက ဟဲ့…. ကြည့်စမ်း ယောက်ယက်ကို ခတ်နေတာပဲ ဆိုသလိုမျိုးပေါ့။ ဆိုတော့ ကိုယ်တွေခေတ်တုန်းကလည်း ဒီလိုမျိုး ဖြစ်မှာပဲ။ အခုခေတ်မှာတော့ ပိုပြီးလည်း ဆိုးလာတယ်။ များလည်း များလာတယ်။ သူတို့အတွက် အခွင့်အရေးတွေကလည်း အများကြီးပေါ့နော်။ ဥပမာ-မိတ်ကပ်ပညာတွေဆိုရင် အင်တာနက်မှာ ကြည့်ပြီးတော့ လေ့လာလို့ ရတယ်။
မကြီးစန်းတို့ ခေတ်တုန်းက အင်တာနက်မပြောနဲ့ မဂ္ဂဇင်းတောင်မှ သပြေတို့၊ သွေးသောက်တို့လောက်ပဲ ထွက်တာလေ။ သုံးလေးအုပ်လောက်ပဲ။ ဒီထက်ပိုပြီး မထွက်ဘူး။ ဂျာနယ်လည်း မရှိဘူး။ နိုင်ငံခြားမဂ္ဂဇင်းဆိုတာကလည်း သူများသင်္ဘောသားတွေ နိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့ ပါလာတဲ့စာအုပ်လောက်ပဲ မြင်ဖူးတယ်။ ဆိုတော့ တော်တော်ရှားရှားပါးပါး ခေတ်ကြီးထဲမှာ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဆိုရင် အနီးစပ်ဆုံး အိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေ ရှိမယ်။ အဲဒီမှာ ဘယ်မင်းသမီး ဘယ်လို ဆံထုံးထုံးသလဲပေါ့… အဲလိုမျိုး ကိုယ် လက်လှမ်းမှီသလောက်လေးနဲ့ အတတ်ပညာကို လေ့လာရတာမျိုးပေါ့။
အခုခေတ်ကလေးတွေမှာကျတော့ ပိုပြီးတော့ သူတို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ များလာတယ်။ မကြီးစန်းတို့ ခေတ်ထက်ကို နေရထိုင်ရတာ ပိုပြီးတော့ အရမ်းကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လူတွေရဲ့ တပြေးညီ ဆက်ဆံခြင်းကို ခံရတဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ ရောက်လာတယ်။ မကြီးစန်းတို့ ခေတ်တုန်းက လူကြားထဲ ထွက်ဖို့ကို တော်တော် ကြောက်ရတယ်။ အစအနောက်ခံရတယ်။ ပြီးရင် မတူသလို မတန်သလိုမျိုး ဟို ဘယ်လိုပြောမလဲ… လူတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်လို့ မရတဲ့ သတ္တဝါတကောင်လိုမျိုး သဘောထားကြတယ်။ အဓိက မကြီးစန်း ကြောက်တာက အဲဒါလေ။
မိန်းမလျာလူတန်းစားကို လူတွေ အထင်သေးမှာကို သိပ်ကြောက်တာပဲ။ နှိမ်မှာကိုလည်း အရမ်းကြောက်တယ်။ ကိုယ်တင် မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးကိုပေါ့နော် နှိမ်မှာကို ကြောက်တယ်။ မကြိုက်ဘူး။ အားနည်းတဲ့ လူတယောက်လိုမျိုး၊ ရွံစရာ သတ္တဝါတကောင်လိုမျိုး၊ နောက် တန်ဖိုးမရှိတဲ့ လူတယောက်လိုမျိုး သတ်မှတ်တာ မကြိုက်ဘူး။ လူပဲ။ လူကို လူလိုပဲ အတူတူပဲ ဆက်ဆံစေချင်တယ်။ အဲဒီတော့ မကြီးစန်းရဲ့ အခုလက်ရှိ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ ဒီလောကကြီးတခုလုံးက ငါတို့တွေက အထင်သေးစရာ မဟုတ်ဘူး။ လူတန်းစေ့တယ်။ ငါတို့တွေကလည်း နင်တို့တွေလို ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တယ် ဆိုတာ ပြချင်တယ်။
အခုခေတ် ကလေးတွေကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့ ရှင်သန်ရာ ဘဝတခုအတွက် သူတို့ရဲ့ Education နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အရမ်းကို မကြီးစန်းတို့ထက် ပညာတော်တဲ့ ကလေးတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ချီးကျူးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဒီလိုမျိုး နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် လေ့လာသင်ယူနိုင်မှု အခွင့်အရေးတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုဘဝမျိုးပဲ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ၊ မိန်းမလျာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယောက်ျားလျာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်…တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတယောက်… တိုင်းပြည်က အားကိုးရတဲ့ လူတယောက် မဟုတ်ရင်တောင် ကိုယ့်မိဘ ညီအကိုမောင်နှမ၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က အားထားရတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်စေချင်တယ်။ ကြိုးစားစေချင်တယ်။
မကြီးစန်းလိုမျိုး မိန်းမပုံ ဝတ်စားဆင်ယင်တဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုမျိုး အကြံပြုချင်ပါသလဲ။
ဘယ်လိုပဲ ဝတ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကြိုက်ပေ့ါနော်။ ဒါပေမယ့် တခုသတိပြုသင့်တာက သတိပြုသင့်တယ်ဆိုတာက တကူးတက လုပ်ခိုင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မကြီးစန်းက ပင်ကိုယ်ကတည်းက အနေအေးတယ်။ ကျောင်းမှာလည်း အနေအေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အေးတယ်ဆိုတာက ပျော့ညံ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အခွင့်အရေးကြုံလာရင်တော့ အသုံးချတတ်တဲ့ ခွန်အားတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းမလျာဆိုတာက မိန်းမစိတ်ပေါက်တဲ့အတွက်ကို မိန်းမနဲ့တော့ သွင်ပြင်လက္ခဏာ မတူရင် နေပါစေ။ လှုပ်ရှားမှုလေးတော့ တူစေချင်တယ်။ စိတ်ထားလေးတော့ တူစေချင်တယ်ပေါ့နော်။ အခုခေတ် မကြီးစန်းရဲ့ ကလေးတွေကို ပြောဖြစ်တယ်။ နင်တို့တွေ မိန်းမလို ဝတ်ထားကြတာက မိန်းမစိတ်ပေါက်လို့ ဝတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး၊ အခြောက်စိတ်ပေါက်လို့ ဝတ်တာ။ မိန်းမစိတ်ပေါက်တယ်ဆိုတာက ဥပမာ- ချက်တယ် ပြုတ်တယ်ဆိုရင်လည်း ဝါသနာပါရမယ်။
သိမ်းတာဆည်းတာလည်း ဝါသနာပါရမယ်။ အရာရာ ကိုင်တာတွယ်တာ၊ သိမ်းတာဆည်းတာကအစ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေးနဲ့ စည်းကမ်းတကျလေး ရှိနေရမယ်ပေါ့နော်။ မကြီးစန်းတို့ မိန်းမစိတ်ပေါက်တာက မိန်းမဖြစ်ချင်ကြတာ။ ငါတို့ကိုယ် ငါတို့ အခြောက်လို့လည်း တခါမှ မယူဆဘူး။ မကြီးစန်း တပည့်ထဲမှာ မိန်းမလို ဝတ်တဲ့လူတွေ ရှိတယ်။ မိန်းမလိုပဲ ဝတ်ထားတယ်။ သို့သော် သူတို့ ဒီပစ္စည်းဆို ဒီနားမှာကို ဒီနားမှာချ။ ဒီပစ္စည်းကို ဒီနားမှာ သိမ်းမယ်ဆို မသိမ်းပဲ နှစ်ရက်လောက် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မသိမ်းပဲထား။ အပြင်က ပြန်လာတယ်ဆို မသိမ်းပဲ တွေ့တဲ့နေရာမှာထားပြီး သူဖာသာသူ လက်လွတ်စပယ် နေကြတာဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ မင်းတုိ့ မလုပ်ရဘူးလို့…။ လူဆိုတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမစိတ် ပေါက်ပြီ ဆိုကတည်းက မိန်းမရဲ့ Nature အတိုင်း ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်။
ဆိုတော့ အဲလိုမျိုး မိန်းမလို ဝတ်တယ်ဆိုကတည်းက ထိုနည်းလည်းကောင်းပေါ့နော်။ အခြောက်မို့လို့ မိန်းမပုံဝတ်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ လိုက်ဖက်ညီအောင် ဝတ်သင့်တယ်။ မကြီးစန်းကတော့ ထမိန်ဝတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာက ထမိန်နဲ့မှ လိုက်တယ်။ ဘောင်းဘီနဲ့ဆို လုံးဝအဆင်မပြေဘူး။ ဘောင်းဘီနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို တခြား လူတွေကလည်း မကြိုက်ကြဘူး။ ဗမာလို ရင်ဖုံးအင်္ကျီ ဝတ်တာကို လူတွေက ပိုကြိုက်ကြတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း မြန်မာရင်ဖုံးအင်္ကျီကို ပိုကြိုက်တယ်။ မကြီးစန်းက ပုခုံးလျောတော့ ဗမာရင်ဖုံးအင်္ကျီနဲ့ ပိုလိုက်တယ်။ ဆိုတော့ အဓိကက မိန်းမလို ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင် မိန်းမလို သိမ်မွေ့တဲ့စိတ်ကလေး ထားပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ မိန်းမစိတ်ပေါက်လို့ မိန်းမလို ဝတ်တာ။ တော်ရုံတန်ရုံ မိန်းမစိတ်မပေါက်ပဲနဲ့ မိန်းမလို ဝတ်ရဲတဲ့သတ္တိရှိဖို့ မလွယ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဝတ်ပြီးရင် မိန်းမဆန်တဲ့ အပြုအမူအနေအထိုင်လေး ရှိစေချင်တာပေါ့နော်။ အဲဒါလေး ပြောချင်ပါတယ်။
မိန်းမလျာတယောက်ဟာ ချစ်သူအစစ် ရဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲတယ်။ ရခဲ့ရင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့စည်းစိမ် ဓနဥစ္စာတွေကို မက်မောလွန်းလို့ပေါ့နော်။ အဲဒီအပေါ်မှာရော မကြီးစန်း ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
ဒါကတော့ အမျိုးမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ မကြီးစန်း တွေ့ခဲ့တဲ့ ချစ်သူတွေက အဲလိုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့မကြီးစန်းကို တကယ့်ကို ချစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်း တခုကြောင့်…ပေါ့။ အကြောင်း တခုကြောင့် ဆိုတာကတော့ မိန်းမမဟုတ်တဲ့အတွက် တချိန်ကျရင် အထားသွားခံရမယ်။ လူတယောက်ရဲ့ ဖီလင်က သူ ဟန်ဆောင်နေတာလား၊ တကယ်လားဆိုတာ အတူနေကြည့်ရင် သိပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကို မက်လို့လာတယ်ဆိုရင် အဲဒီလူဟာ Money boy ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
ဝတ်ကျေးတန်းကျေပဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ ဆိုတော့ အဲလိုမျိုး လောကကြီးထဲမှာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုး မကြီးစန်းတို့လို လူမျိုးတွေအပေါ်မှာ လုပ်စားနေတဲ့ လူမျိုးတွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကတော့ လူတယောက်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်ဓါတ်နဲ့ ဆိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ မိန်းမပုံဝတ်ပြီး အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အခက်အခဲတွေ အများကြီး ရှိနိုင်သေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအပေါ် မကြီးစန်းရဲ့ အမြင်လေးကို သိချင်ပါတယ်။
အဝတ်အစားကတော့ ရုံးမှာလုပ်တဲ့လူဆိုရင် ရုံးဝန်ထမ်းတဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်… အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝန်ထမ်းဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ Rules အရ ကိုယ်က မိန်းမစိတ်ပေါက်ပေမယ့် မိန်းမလို ဝတ်တာကတော့ မသင့်တော်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဥပမာ- Shopping Center တခုမှာ Cosmetic ကောင်တာက ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့ မိန်းမလိုဝတ်တာက သင့်တော်တယ်လေ။ သူတို့အတွက် ပြဿနာလည်း မရှိဘူး။ ပြောစရာလည်း မလိုဘူး။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ဖြစ်စေဦး။ ကုမ္ပဏီက ဒါရိုက်တာ အိုကေတယ်၊ ကိုယ်လည်း အိုကေတယ်ဆိုရင် ဝတ်လို့ရတယ်။
ဘောင်ခတ်တယ် ဆိုတာကတော့ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတခုလို့ ထင်တယ်။ လူတယောက်မှာ သူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက် လွတ်လပ်ခွင့် ရှိတယ်။ ယူဆခွင့် ရှိတယ်။ ဝတ်ဆင်ခွင့် ရှိတယ်။ ဒါကတော့ လူတယောက်ရဲ့ Human Rights ပေါ့နော်။
ဘောင်ခတ်တယ်ဆိုတာမှာလည်း ဥပမာ- ကျောင်းဆရာတယောက် ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ နောက်တွဲဆံထုံးနဲ့ ဆွဲခြင်းနဲ့ သွားလို့တော့ မရဘူးပေါ့နော်။ ဒါကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းဆရာဆိုတဲ့ ဂုဏ်နဲ့တော့ လည်ကတုံးနဲ့၊ တိုက်ပုံနဲ့၊ ပုဆိုးနဲ့တော့ ဝတ်ရမှာပေါ့။ အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝတ်….. ရတာပေါ့။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ။ အစိုးရရုံးတရုံးရဲ့ အရာရှိဖြစ်နေရင် အောက်ကဝန်ထမ်းတွေ လေးစားအောင် ကိုယ်က မည်သို့ပင် ဖြစ်နေပါစေ၊ မည်သည့်ဘဝကိုပဲ ပိုင်ဆိုင်နေပါစေ၊ သူ့လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ လေးစားမှု ရယူဖို့အတွက် သူဟာ သူ့ရာထူးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ရှိသင့်တယ်လို့ မကြီးစန်း ထင်ပါတယ်။ ဘောင်ခတ်တယ်ဆိုတာထက် လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝနဲ့ ပိုပြီးတော့ သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
လိင်တူချစ်သူတွေ တော်တော်များများ ကြောက်လန့်ကြတဲ့ ပုဒ်မ ၃၇၇ နဲ့ပတ်သက်ပြီး မကြီးစန်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဆိုတာ သိပါရစေ။
လူ့ဘောင် လူ့လောကမှာ ဒီလိုမျိုး မနေရဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားသော်ငြားလည်း ( ပုဒ်မအရသာ တားမြစ်ထားသော်ငြားလည်း) ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း (အတိအလင်း) နေနေကြတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ မကြီးစန်းတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကလို သိပ်ပြီးတော့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် မဟုတ်တော့ဘူး။ သို့သော် အတိအလင်းပေါ့။ ဒါမျိုးကို ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အတော်များများမှာလည်း ဒါမျိုးကို ခွင့်ပြုနေကြပြီ ဆိုတော့…။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မချစ်ပဲလည်း နေကြမှာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ မအိပ်ပဲလည်း နေကြမှာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ မဆက်ဆံပဲလည်း နေကြမှာလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ ဆိုတော့ နားလည်မှုလေး ပေးလိုက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။
အခုချိန်မှာဆိုရင် မြန်မာပြည်ကြီးဟာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း တိုးတက်ထွန်းကားလာနေပြီ။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ လိင်တူချစ်သူ အခွင့်အရေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လည်း သင့်တော်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ရှေးရိုးစွဲ လူတွေ နည်းသွားရင်တော့…..။ မကြီးစန်းတို့ Generation နဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်။ Next Generation နှစ်ခုလောက်ဆိုရင်တော့ အိုကေမယ် ထင်ပါတယ်။
ရိမ်းဘိုးမဂ္ဂဇင်း စာဖတ်သူတွေကို မကြီးစန်းအနေနဲ့ ဘာတွေများ ဖြည့်စွက်အကြံပေး ပြောဆိုလိုသလဲ။
အမှန်တော့ မကြီးစန်း ပြောထားခဲ့တဲ့ အထဲမှာလည်း ပါပြီးပါပြီ။ မိန်းမလျာဖြစ်လို့ လူတွေက နှိမ်တယ်၊ ရှုတ်ချတယ်၊ အပယ်ခံရတယ်ဆိုတာကို မကြီးစန်း လုံးဝမဖြစ်စေချင်ဘူး။ မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။ ကိုယ့်ကို လုပ်ရင်လည်း မကြိုက်ဘူး။ ကိုယ့်ကဲသို့ ဘဝတူတွေကိုလည်း အဲလို ဆက်ဆံရင် မကြိုက်ဘူး။ မည်သူပင်ဖြစ်စေ။ လူတယောက်ဟာ သူဟာ လူပဲ။ လူကို လူလိုပဲ သတ်မှတ်စေချင်တယ်။ သူသည် လောကထဲမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတယောက် မဟုတ်ရင်တောင်မှ တဒေါင့်တနေရာမှာ အသုံးဝင်တဲ့သူလေး တယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုပင် ဒီလူတယောက်ရဲ့ဘဝက ကျေနပ်စရာ ကောင်းနေပြီပေါ့နော်။
အဲတော့ မကြီးစန်းကဲ့သို့သော ဘဝတူ မိန်းမလျာတွေကိုပေါ့…။ လောကကြီးထဲမှာ ယောက်ျားလျာနဲ့ မိန်းမလျာမှာ ယောက်ျားလျာတွေကို လူတွေက သိပ်မပြောကြဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ယောက်ျားစိတ် ပေါက်တာက မြင့်မြတ်တာပေါ့… ဗမာအယူအဆအရပေါ့။ မကြီးစန်းတို့ ငယ်ငယ်လေးတုန်းကလည်း ဒီလိုပြောခဲ့တယ်။ မင်းကွာ ယုတ်ညံ့တဲ့ မိန်းမစိတ်ပေါက်တယ်။ ယောက်ျားလေးဆိုတာ ဘုရားဆုပန်လို့ရတဲ့ အနေအထားတခုကို မင်းတို့က ယုတ်ညံ့တဲ့ဘဝကိုများ ဆင်းချင်တယ်။
ဟုတ်တယ်။ ယောက်ျားလေးဘဝက မြင့်မြတ်တယ်။ မိန်းမလျာတွေက ယုတ်ညံ့တယ်။ ယောက်ျားလေးဘဝက ဘုရားဆု ပန်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဘုရားဖြစ်တဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ။ ဘုရားဖြစ်တဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်မှ မရှိဘူး။ ယောက်ျားတိုင်း ဘုရားမဖြစ်ဘူး။ နောက်တခုက ယောက်ျားလေးထဲမှာ မြင့်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားလေး ဆိုတာကကော အများကြီး ရှိလို့လား။ စံထားလောက်တဲ့ ယောက်ျားဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ ရနေပါတယ်။
အဲတော့ အခြောက်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ ယောက်ျားဖြစ်သည်ဖြစ်စေ သူသည် သူ့ဘဝမှာ အမဲစက် မဖြစ်ဖို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒုက္ခမပေးဖို့၊ မိသားစုမှာ အနှောင့်အယှက် မပေးဘူးဆိုရင် သူသည် လောကမှာ ရှင်သန်ဖို့ သင့်တော်တဲ့သူ တယောက်ပဲ။ မကြီးစန်း အခုနက ပြောခဲ့သလိုပဲ။ ကိုယ်သည် အနှိမ်ခံဘဝ၊ အပယ်ခံဘဝ မဖြစ်အောင်ပေါ့နော် ကိုယ့်ရဲ့လောက၊ သဘာဝ၊ လူတွေကြားထဲမှာ တဒေါင့်တနေရာကနေ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူလေး ဖြစ်စေချင်တယ်။ ကိုယ့်လောကကြီးကို အမဲစက် မဖြစ်အောင်၊ မညစ်နွမ်းအောင် လုပ်တဲ့ လူတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်။ နောက်တခုက တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့.. ကိုယ့်မိသားစုဆို မိသားစုမှာ အားကိုးအားထား ပြုရတဲ့သူ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က အားကိုးအားထား ပြုရတဲ့သူ ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်။
Boyhood Sex Memories (Part 1)
ငယ်ဘ၀ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးကို ပြန်လည်ငဲ့စောင်းကြည့်မိစေတဲ့ အမှတ်တရ ပြောကြားချက်များကို စုစည်းမှု တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးကာ သူငယ်ချင်းတို့ကို ဝေင...
ထူးဆန်းသည့် Gay ဘဝ
မြန်မာ့ မိတ်ကပ်အနုပညာရှင် မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်းနှင့် ...
(ကလာမိုင်ဒီးယား) နဲ့ (ဂနိုးရီးယား) ခြားနာချက်
Help (Episode 5)
လူငယ်စာနယ်ဇင်းသမား လိင်တူချစ်သူတဦးနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း...